Sergio Ramos iyo Nacho oo shaki laga gelinayo Euro 2020…(Ma dhici doontaa in safka qaranka Spain ee Euro 2020 laga waayo xiddiga u ciyaara Real Madrid?) - Wardeeq 24 TV Sergio Ramos iyo Nacho oo shaki laga gelinayo Euro 2020…(Ma dhici doontaa in safka qaranka Spain ee Euro 2020 laga waayo xiddiga u ciyaara Real Madrid?) Wardeeq 24 TV
Home Sports-ka Sergio Ramos iyo Nacho oo shaki laga gelinayo Euro 2020…(Ma dhici doontaa...
Sergio Ramos iyo Nacho oo shaki laga gelinayo Euro 2020…(Ma dhici doontaa in safka qaranka Spain ee Euro 2020 laga waayo xiddiga u ciyaara Real Madrid?)
Marka aynu dib ugu laabanno bishii September ee sanadkii 2018, Tababare Luis Enrique ayaa ku adkeystay inuu safka xulka qaranka dalka Spain kusoo daro illaa iyo shan xiddig oo ka tirsanaa Real Madrid kuwaasoo kala ahaa Sergio Ramos, Dani Carvajal, Nacho Fernandez, Isco, Dani Ceballos iyo Marco Asensio.
Balse ku dhowaad saddex sano kaddib, xaaladda ayaa ka duwan sidii hore, maadaama laga yaabo inay Los Blancos ku yeellan weyso safka Spain ee Euro 2020 xitaa hal ciyaaryahan.
Macallin Enrique ayaa maalinta Isniinta ku dhowaaqi doona safkiisa rasmiga ah ee uu kala qayb galayo tartanka qarammada qaaradda Yurub, waxaana haddii uu safkiisa ka reebo Nacho iyo Sergio Ramos ay noqon doontaa inaysan Madrid ciyaaryahan ku yeelan safka La Roja ee Euro ciyaaraya xagaagan, maadaama xiddigihii kale ee xulkan matali lahaa qaab ciyaareed liita oo ay soo bandhigeen awgeeda aysan ku jirin qorshaha macallinkii hore ee Barcelona.
Dani Carvajal iyo Lucas Vazquez ayaa dhaawacyo garoommada kaga maqnaan doono muddooyinka dhow, halka Isco iyo Asensio ay lumiyeen qaab ciyaareedkooda, waxaana intaas sii dheer inuusan Ramos weli si buuxda uga soo kabsan dhaawacyadii haraadiyay qayb dambe ee xilli ciyaareedkan.
Daafaca Real Madrid ayaa kaliya saddex kulan u ciyaaray kooxdiisa tan iyo 14-kii January inkastoo uu shaqo adag qabanayo si uu ugu diyaar noqdo Euro, la yaab ayayse noqon doontaa inuu Enrique sahal kaga reebo xulkiisa xiddiga Kabtanka u ah isla markaasna ugu safashada badan.
Qaab ciyaareedka Nacho ee qaybta labaad ee xilli ciyaareedkan ayaa aad u wanaagsanaa, hase ahaatee, waxaa lasoo sheegaya inay dhanka dooqa macallinka kaga horreeya xiddigaha kala ah Pau Torres, Eric Garcia, Inigo Martinez iyo Aymeric Laporte.
Si kastaba ha ahaatee, wali ma aysan dhicin safka qaranka Spain u matalayo tartammada waaweyn laga waayo xiddig ku ab-tirsada Real Madrid iyadoo marka kaliya ee ay Madrid qaranka ku yeelatay hal xiddig oo qura ay ahayd Koobkii Adduunka ee 1950 xilligaas oo uu Luis Molowny ahaa laacibka kaliya ee Los Blancos ay ku lahayd safka La Roja.
Previous articleChelsea oo talaabo u qaadday saxiixay Robert Lewandowski…(Intee wax u marayaan Blues?)
Next articleRASMI: Liverpool oo soo bandhigtay maaliyadda ay gurigeeda kula ciyaari doonto xilli ciyaareedka dambe…(Xilliga ay ku ciyaari doonto kulanka ugu horreeya, xilliga la iibsan karo & naqshaddeeda)